Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne oo banaanbax uu ka bilowday
Wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne oo banaanbax uu ka bilowday
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa caawa waxaa ka jira xaalad kacsanaan ah iyadoo banaanbaxyo loogaga soo horjeeda maamulka Hirshabelle uu ka bilowday wadooyinka waaweyn ee Bariga magaalada Beledweyne.
Dadweyne faro badan ayaa isugu soo baxay kuwaasoo taageeraya gadood ay sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada dowlada oo la wareegay xarunta maamulka gobolka Hiiraan.
Taageerayaasha General Abuukar Xuud ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne gaar ahaan agagaarka saldhigga Booliska magaalada halkaa oo ay ku sugan yihiin ciidamada booliska.
Dadka banaanbaxaya ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay ugaga soo horjeedaan maamulka Hirshabelle gaar ahaan Madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen.
Ciidamada gadoodsan ee la wareegay xarunta maamulka gobolka ayaa weli halkaasi ku sugan iyagoo fariisimo ka sameystay gudaha iyo agagaarka xarunta maamulka gobolka Hiiraan.
Ma jiro illaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan dowlad goboleedka Hirshabelle.
Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku sugan Wasiirka Arimaha Gudaha dowlada federalka Gereral Muqtaar Xuseen Afrax iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii waqtiga ka dhamaaday.